Banyere Anyị - Shandong Excitech Co., Ltd
Nnọọ na EXCITECH
Ekwentị: + 86-531-69983788
Ngwọta Maka Panel ngwá ụlọ
Automatic Cabinet Door Ngwọta
Automatic nesting Ngwọta
Nkà na ụzụ Edgebanding
Ebe Ọrụ PTP
Ise Axis machining Center
Ọrụ center Ma CNC rawụta
A Inyefe Onwe ka Excellence
Excitech, a ọkachamara ígwè n'ichepụta ụlọ ọrụ, e guzobere na kasị ahọ ahịa n'uche. Na a n'ichepụta eweta na China ma nditịm ana na kasị elu àgwà ụkpụrụ, anyị na-na-ekwe nkwa na-arụ na-elu nkenke na ndị fọdụrụ n'ezinụlọ oge gị kasị achọ ulo oru chọrọ.
State-nke na-Art Ngwaahịa na Facilities
Anyị dịgasị iche iche nke ngwa ngwa dị elu mma Pọtụfoliyo agụnye Panel ngwá ụlọ Production Solutions, Multi-sized 5-axis machining Centers, Panel ịwa nkume, Point-to-Point Work Centers na ndị ọzọ na machineries raara nye woodworking na ndị ọzọ na igodo ngwa.
Quality mgbe outsourced-na bụ ya mere anyị nyekwara kpamkpam na anyị onwe anyị machining owuwu. All anyị na ngwaahịa, site n'ihe ndị kasị echekwa ụdị kasị mgbagwoju anya ndị na-nkenke engineered iji hụ na ụkpụrụ dị elu na-atụ anya si a ụlọ ọrụ dị ka Excitech. The dum n'ichepụta usoro na-nlezianya na n'usoro achịkwa iji nweta ihe na-ekwe nkwa nkenke na àgwà.
Mkpa Gị, anyị Driving Force!
Anyị na-hazie ihe ngwọta dị ka gị mkpa. Ma ọ bụ na-amalite na-elu-ulo oru ma ọ bụ obere ọnụ ọgụgụ arụmọrụ-eri oru oma na emeputa n'uche ma ọ bụ ike ukwuu arụmọrụ achọ ukwuu akpaghị aka projects- Excitech mgbe niile nwere ihe ngwọta maka gị n'ichepụta mkpa.
Anyị na-agba mbọ na-eme ka azụmahịa gị a ịga nke ọma site n'inye ahaziri ngwọta dị mkpa ọbọ ihe mgbaru ọsọ gị. The enweghị nkebi mwekota nke anyị machineries na ulo oru akpaaka software na usoro eme ka anyị nwekwuo mmekọ 'mpi uru site n'inyere ha aka nweta:
Elu àgwà ngwaahịa na elu mmepụta arụmọrụ
Lower akwụ ụgwọ otú measurable ego
Shortened mmepụta oge
Maximized ike n'ihi na mma uru
N'ike n'ike belata okirikiri ugboro
Global Presence, Obodo-apụghị Iru
Excitech pụtara onwe ya mma nke maara ihe site na ya nke ọma ọnụnọ n'elu 90 mba n'ụwa dum. Akwado site na a siri ike na akọ ahịa na ahịa na netwọk dị ka nke ọma dị ka oru nkwado ìgwè ndị na-amacha na akanamde na-enye anyị mmekọ kasị mma na ọrụ, Excitech nweela a zuru ụwa ọnụ aha dị ka otu n'ime ihe ndị kasị pụrụ ịdabere na tụkwasịrị obi CNC ígwè ngwọta na enye.
Raara Onwe Ije Ozi Ị
Na Excitech, anyị abụghị naanị a n'ichepụta ụlọ ọrụ. Anyị bụ ndị azụmahịa maka na azụmahịa mmekọ.
Anyị oru nka, àgwà anyị na ngwaahịa, anyị na ala nke nkà n'ichepụta ụlọ ọrụ anyị, ume anyị na ahịa ọrụ, anyị eru sales consultancy, na anyị raara onwe anyị nnyocha na azụmahịa mmepe - niile nke ndị a na-n'ihu anyị azụmahịa mmekọ gburugburu ụwa na olileanya nke na-enyere ha aka iru ihe ịga nke ọma.
Adreesị: NO.1832 GANGYUANQI RD, High-Tech District Jinan, Shandong Province, PRChina
Ngwọta maka Ngwongwo Ogwe
Ebe Arụ Ọrụ na CNC Router
Skype: Nkwado Excitech
COPYRIGHT © 2020 JINAN SINGHUI CNC AKWCHKWỌ CO., LTD